Trafikana ”artanes”… : tantsambo malagasy roa lahy migadra atsy la Réunion | NewsMada
Trafikana ”artanes”… : tantsambo malagasy roa lahy migadra atsy la Réunion
Voatana ary naiditra am-ponja atsy la Réunion, ny alahady teo, ny tantsambo mpanjono malagasy roalahy, voarohirohy ho mpanondrana an-tsokosoko « artanes », fanafody fampiasan’ny mpidoroka zava-mahadomelina, ary voarara ny fivarotana azy. Fonosana 3.600 tamin’io fanafody io, sy lelavola 13.600 euros no tratra tany amin’izy ireo.
Voasambotry ny mpitandro filaminana tany amin’ny seranatsam-bon’ny La Pointe-des-Galets ny tantsambo mpanjono malagasy roa lahy, ny alahady teo, noho ny fikasana hanondrana artane. Naiditra am-ponja vonjimaika avy hatrany ireo rehefa natolotra ny fampanoavana tany an-toerana. Nandritra ny fisavana ny sambo lehibe La Fournaise, niasan’ireo teratany malagasy ireo, ny nahitana ireo fanafody tsy azo aondrana ireo.
Voararan’ny lalàna iraisam-pirenena ny fanondranana azy ity, ary tsy azo amidy raha tsy mahazo alalana avy amin’ny dokotera ny artane. Fanafody mampitony izy io, ary avadiky ny mpidoroka ho zava-mahadomelina. Mahery vaika rehefa ampiarahana amin’ny rongony na toaka.
Nahitana 3.600 fonosana amin’ireo artane ireo ary mbola nahitana vola 13.600 euros ihany koa nafenina tao anaty fitaovana fametrahan-drano. Araka ny fanazavan’ny fampanoavana any La Reunion, manodidina ny 90.000 ka hatramin’ny 120.000 euros vidin’ireo fanafody ireo.
Tsy voalohany no nahatrarana Malagasy nitondra ity karazam-panafody ity tany La Réunion fa efa misy hatrany. Ny taon-dasa teo, efa nisy tompon’antoka voasambotra tamin’izany. Malagasy hatrany ireo tratran’ny mpitandro filaminana manao trafikana zava-mahadomelina. Ankoatra ny artane, anisan’ny aondrana avy aty amintsika ihany koa ny heroïne.
Mandalo eto Madagasikara
Araka ny fanadihadiana efa nataon’ny mpitandro filaminana vahiny, lalana fandalovan’ireo mpanondrana zava-mahadomelina mahery vaika eto amintsika. Izany hoe, avy any ivelany ireo zava-mahadomelina ireo no ampidirina eto, ary eto mitady olona hitondra azy any La Réunion, Maorisy na Afrika Atsimo indray ireo mpanondrana.
Any ivelany hatrany anefa vao sarona ireo zava-mahadomelina ireo. Tsy tratra eny amin’ny seranam-piaramanidina eto amintsika na ny fidirany na ny fivoahany. Tsy ampy sa misy ny firaisana tsikombakomba amin’ny ratsy ny fitaovana hitiliana?
Miandry ny fitsarana azy any La Réunion ireo Malagasy roa lahy vao ho fantatra ny hoaviny.